Ukukhishwa Kwemikhiqizo Emisha Emakethe YaseYurophu
Amakhasimende othandekayo, sizobuyekeza uhlu lwemikhiqizo emisha njalo. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi ngomkhiqizo omusha, noma unezidingo ezintsha zokuthuthukiswa komkhiqizo, sicela uxhumane nathi, sizokuphendula ngokushesha okukhulu. Yazi okuningi ngemikhiqizo yethu, sicela uxhumane ne-sales@ktg-auto.com nge-det ...
Ukukhishwa Kwemikhiqizo Emisha Emakethe YaseNyakatho Melika
Amakhasimende othandekayo, sizobuyekeza uhlu lwemikhiqizo emisha njalo. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi ngomkhiqizo omusha, noma unezidingo ezintsha zokuthuthukiswa komkhiqizo, sicela uxhumane nathi, sizokuphendula ngokushesha okukhulu. Into Inkomba Ingxenye Inombolo OE Inombolo oluvala amasondo Izimoto Piston Siz ...
Umehluko phakathi kweCaliper elungisiwe neCaliper elintantayo
Bonke abakhongi abafani. Njengoba onke amaphethini wokugqoka amabhuleki angalingani akufani, futhi namakhambi awafani. Ngaphambi kokuthi uqale ngokulahla abakhongi, kufanele uqale uqonde umehluko phakathi kocingo olungaguquguquki nolintantayo. Abakhongi abalungisiwe banama-piston amabili noma ngaphezulu aphikisana ne-eac ...
Amakhasimende othandekayo, sizobuyekeza uhlu lwemikhiqizo emisha njalo. Uma ufuna ukwazi imininingwane eminingi ngomkhiqizo omusha, noma unezidingo ezintsha zokuthuthukiswa komkhiqizo, sicela uxhumane nathi, sizokuphendula ngokushesha okukhulu. AYIKHO i-ax ...
Izinhlobo briper calipers